Af-Garre - Wikipedia
Macluumaadka halkaan ku jira ee maqaalkaan ama qaybtaan Maaha mid la Hubo Waxaa laga yaabaa in aaneey ahayn mid lagu kalsoonaan karo in ku filan, waxa ay ubaahantahay in ay eegaan dadka khibradda uleh.
Waad ka caawin kartaa Wikipedia Macluumaadka ku jira maqaalkaan/qaybtaan, ka badal wax yaabaha lagama maarmaanka ah, kuna xooji macluumaadkaada wikipedia:xigasho adigoo soo xiganaya ilo muhiim ah.
Af-Garre waa lahjad ka mid ah lahjadaha beelaha Soomaaliyeed ee luqada Afka Soomaaliga. Lahjadaan waxaa looga hadlaa gobollada Shabeellaha Hoose, Baay, Bakool, Gedo qeybo kamid ah,iyo goboblka waqooyi bari kenya iyo gobolka Liibaan ee Ethiopia |Shabeellaha Hoose, Baay, Bakool, Gedo ,iyo goboblka waqooyi bari kenya iyo gobolka Liibaan ee Itoobiya iyo dalal kale Waxaana lahjadaan ku hadla beesha Garre oo kamid ah beelaha soomaaliyeed kuwooda ugu tirada badan.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Af-Garre&oldid=167504"
Maqaalda hubinta ubaahan
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 18 Maarso 2017, marka ee eheed 20:01.